Ejiji Princess – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Site na nchịkwa | Ọktoba 21, 2021
Ịchọrọ ịgba egwu nke ọma na ala ịgba egwu na uwe dị iche iche dị iche iche wee ghọọ kpakpando nke ndị na-ege ntị? Ịchọrọ ịdekọ oge mara mma wee bipute na My Twiiiitter iji nweta nde mmadụ mkpịsị aka elu? Ugbu a ihe niile ị chọrọ nwere ike imezu!
Ị nwere ike iyi uwe nwa agbọghọ ahụ n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ! Gụnyere akpụkpọ ya, uwe, ndabere, wdg. Were ya na ị bụ onye na-ese foto, nye ihe nlereanya gị anya zuru oke, ma were foto nka mara mma! N'egwuregwu anyị, anyị akwadola ọtụtụ nhọrọ nke ihe maka gị iji yiwe ihe nlereanya gị! Site n'isi ruo na mkpịsị ụkwụ, akpa na ọla, ị nwere ike ịgwakọta ihe niile dị ka masịrị gị, ma ị nwekwara ike iyi uwe ụdị ụdị dị iche iche nke anyị kwadobere maka gị, dị ka amoosu nke Magic Academy, Snow Queen na Princess Rose!
Mgbe ejiji nwa agbọghọ gị, ị nwere ike ịse foto nke uwe ya mara mma wee ziga ya na My Twiiiitter ka ị nweta Thumbs elu! Enwere ike ikpokọta Thumb up ma ị nwere ike iji ya zụta ụfọdụ ihe ịchọrọ n'efu!
Họrọ otu ụdị uwe mara mma na ala ịgba egwu, wee họrọ usoro ịgba egwu, kpatụ ihuenyo ahụ, ka ọ na-enwu n'etiti ụlọ ịgba egwu! Cheta na Thumb elu enwetara site na ịgba egwu nwekwara ike iji zụta ihe!
◾ Ngwakọta ọ bụla nke edozi isi, ọtụtụ puku uwe, wdg.
◾ Isiokwu dị iche iche na-aghọta nrọ gị dị iche iche!
◾ Ọrụ ịgba egwu, Ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta!
◾HD foto dị mma, ọmarịcha mmetụta pụrụ iche, na ezigbo ahụmịhe egwuregwu!
Budata egwuregwu ugbu a, ozugbo wee bụrụ dike!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Fashion, Princess
← Solitaire Tripeaks Meover – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike EspritBoom – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
Slash & Nyefee: Ndị aghụghọ Guild Raids dị ndụ&Mbanye anataghị ikike
Ihe ịma aka squid: Egwuregwu vlanahụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ụlọ mkpọrọ na mgbagwoju anya – Ndị aghụghọ Sokoban&Mbanye anataghị ikike
Anụ ọhịa dị egwu’ Akụkọ mgbe ochie – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Anyị bụ Illuminati: Nkwekọrịta – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ụmụaka Pail mkpofu : Egwuregwu Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ịgba ọkpọ n'ezie 2 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Inside Out Thought Bubbles – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Emoji dakọtara mgbagwoju anya-ụbụrụ elu – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ịlanahụ Egwuregwu squid – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike